Ubuntu 15.04 မှာ မြန်မာစာရိုက်လို့အဆင်မေပြလို့ - MYSTERY ZILLION
Ubuntu 15.04 မှာ မြန်မာစာရိုက်လို့အဆင်မေပြလို့
June 2015 in Ubuntu
Ubuntu 15.04 မှာ မြန်မာစာရိုက်ရတာ Libre Office မှာ လံုးဝအဆင်မေပြလို့ ကူညီေပးကြပါ... ကျန်တဲ့ေနရာေတွမှာလည်း အဆင်မေပြလို့ပါ
What keyboard are you using ? You can use key magic with iBus
Yes, I'm using iBus but not key magic. Thanks I'll try this.
မူရင်းပါတဲ့ စာရိုက် စနစ်က သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ် ခင်ဗျ။ ဝင်းဒိုး ၈ မှာပါတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ရိုက်ပုံ ရိုက်နည်း က
ဗျည်း+ဗျည်းတွဲ+သရ လို့ ရိုက်ရပါတယ်။
ဗျည်းတွဲ=ျြွှ(ပင့်ရစ်ဆွဲထိုး)
သရ=အ အာ အီ အီ... အို
ဥပမာ=> ကျောင်း = က+ျ+ေ+ာ+င+်+း
နောက်တစ်ခု ရှိတာက အသတ် နဲ့ အောက်ကမြင့် (့) မှာ အောက်ကမြင့် ကို ရှေ့မှာထားပြီးတော့ ရိုက်ရပါတယ်။( အသတ်ကို ရှေ့မှာထားတဲ့ အကြောင်းတော့ ရှိပါတယ်။ ကျနော် မမှတ် မိတော့လို့ ပါ)